Sheekooyinka La Soo Bandhigay - Gudbinta La'aanta
Sheekooyinka sheekooyinku waa udub -dhexaadka guddidan. Dhageyso si toos ah dhallinta ku nool Mareykanka oo dhan waayo -aragnimadooda shaqsiyeed ee barashada STEM.
Kuwa soo socdaa waa sambal yar oo ah waxa aan maqalno UnCommission-ka oo si joogto ah ayaa loo cusboonaysiin doonaa.
Maskaxda xisaabta maqan
Elena (iyada/iyada), 22, New York
"Kaliya ma ahan wax maskaxdayda ku soo dhacaya. Maskaxda xisaabta ma lihi.”
Efrayim (isaga/isaga/isaga), 18, Texas
“Macallinkani waxa uu ahaa fanaan. Waligey ma iloobi doono iyada sababtoo ah waxay saameyn xooggan ku yeelatay noloshayda."
Yazmine (iyadu/iyada), 16, Arizona
"Waxaan ka fekeraa mashruucayga fasalka toddobaad mar kasta oo aan galayo xiisadaha sayniska… Ma dareemin in aan maqanahay mana dareemayn in aanan halkaas joogin. Taasi waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan dareemo in wax walba ay leeyihiin meel iyo nidaam."
Matalaadda vs. Haysashada
Alexis (iyada/iyada), 25, New York
"Mateladu waxay noqon kartaa qaybta ugu fudud. Waxaan ka heli karnaa dadka albaabka, waxaan ka heli karnaa dadka inay yimaadaan, waxaan ka dhigi karnaa dadka inay maqlaan sheekooyinkeena, waxaan ka heli karnaa dadka STEM, waxaan ka heli karnaa dadka sayniska, farsamada, injineernimada iyo xisaabta, laakiin ma heli karnaa iyaga joog?”
Gabar Nakhshad Ciyaareed Ku Jirta
Daijiya (iyadu/iyada), 18, Missouri
"Waxaan ahay qof dumar ah oo midab leh oo gasha beer aan qaar badan lagu soo dhawayn ama xitaa la aqoonsanayn."
Inanta oo laga dhigo naag cilmi
Jordan (iyada/iyada), 21, Texas
"Waxaan xasuustaa macalinkaygii sayniska ee fasalka lixaad inuu biyo nadiif ah ka keenay il uu soo booqday arday kasta oo fasalka ku jira si uu isugu dayo haddii ay rabaan ... Runtii aad ayaan ula yaabay in waxyaalahan ay jiraan iyo in dhulku nagu filan karo si ay u suurtowdo."
Mariam (iyada/iyada), 22, California
"Oo wuxuu yidhi, "Hagaag, taladayda waxaan ku siinayaa waa inaad iska daysaa fasalkayga, sababtoo ah adiga maaha, kuma jirto fasalkayga, waxaad u baahan tahay inaad gasho fasal xisaabeed hoose." ”
Inaad noqoto Shaqaale Adag
Danielle (iyada/iyada), 19, California
“Markii aan dhex fadhiistay muxaadaradii ugu horreysay ee biology-ga, qalbigaygu gabi ahaanba wuu quustay. Wax fikrad ah kama helin waxa uu borofisarkayga ka hadlayo, waxayna u ekayd in mid kasta oo asaageyga ka mid ahi sameeyo. "
Dayanara (iyada/iyada), 27, New York
"Waa ay i taabatay sababtoo ah waxaan ahaa sida, wow, like, wuxuu igu arkaa wax aanan runtii xitaa is arkin ama aanan dan ka lahayn inaan arko naftayda."
Hoos ka daawo sheekooyinka